Linux Qaybinta iyo Maareeyaha Xidhmada Guix 1.2 Waa La Sii Daayay | Laga soo bilaabo Linux
La bilaabay maareeyaha xirmada GNU Guix 1.2 iyo xirmada qeybinta GNU / Linux ee lagu dhisay saldhigan.
Qalabka qaybinta waxaa lagu rakibi karaa nidaam hawlgal oo kalidii ah ee nidaamyada ku shaqeynta, konteynarrada iyo qalabka caadiga ah, kuna shaqeyn kara qeybinta horay loo rakibay ee GNU / Linux, taasoo u noqoneysa barxad lagu hirgeliyo codsiyada.
Isticmaaluhu wuxuu leeyahay shaqooyin sida xisaabinta ku tiirsanaanta, shaqee xidid la'aan, dib ugu noqoshada qoraalkii hore haddii ay jiraan dhibaatooyin, maareynta qaabeynta, bay'adaha (abuurista nuqul sax ah ee jawiga barnaamijka kombiyuutarada kale), iwm.
Waxaa xusid mudan taas maareeyaha xirmada GNU Guix wuxuu ku saleysan yahay hawlgalka mashruuca Nix iyo, marka lagu daro howlaha caadiga ah maareynta xirmada, waxay taageertaa astaamaha sida sameynta casriyeynta macaamil ganacsi, awooda dib u rogida wararka cusub, ka shaqeyso adiga oo aan helin mudnaanta superuser, taageerida astaamaha ku xiran shaqsiyaadka isticmaala, kartida isku mar lagu rakibi karo noocyo badan oo barnaamij ah, qashin aruuriyayaasha (aqoonsiga iyo ka saarida noocyada xirmooyinka ee aan la isticmaalin).
Si loo qeexo qoraallada dhismaha iyo xeerarka baakadaha, waxaa loo soo jeediyay in la isticmaalo luqad heer sare ah oo gaar u ah domain-ga Waxyaabaha loo yaqaan 'Guile Scheme API API', oo kuu oggolaanaya inaad ku fuliso dhammaan howlaha maaraynta xirmooyinka ee ku jira Qorshaha luqadda barnaamijka waxqabadka.
1 Waxyaabaha ugu muhiimsan ee Guix 1.2
2 Degso Guix 1.2
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee Guix 1.2
Qaabkan cusub maareeyaha baakadka awood u leh inuu xaqiijiyo keydadka xirmooyinka ayaa la hirgeliyey "Guix jiido" iyo amarrada la midka ah ayaa hadda si qarsoodi ah loo xaqiijiyaa koodhka laga soo jiiday bakhaarka, taasoo ka hortageysa ficillada aan la oggolaan in laga soo saaro bakhaarka.
Sidoo kales ayaa lagu daray taliska "Guix git xaqiijin", taas oo pogolaanaya in la isticmaalo farsamada aqoonsiga waxaa loo soo jeediyay bakhaarrada git aan macquul ahayn.
Amarada "Guix pull" iyo "guix system reconfigure" ayaa loo hirgaliyay si loo ogaado loona joojiyo dib u soo celinta nidaamka noocyadi hore si looga hortago barnaamijyada in dib loogu celin noocyada nugul si looga faa'iideysto nuglaanta loo dejiyay noocyada hada jira.
Waxaa lagu daray adeeg cusboonaysiin otomaatig ah kaasoo xilliyo fuliya "guix pull" iyo "guix system reconfigure" si nidaamka loo cusbooneysiiyo, iyo sidoo kale taageerada SHA-3 iyo BLAKE2 crypto hashes habka isku duwidda iyo API.
Waxay hagaajisay adeegsiga qalabka wax lagu rakibo iyo qoraalka lagu rakibo Guix deegaanka qaybinta kale.
Waxaan sidoo kale heli karnaa qaababka cusub ee paging ee raadinta guix, raadinta nidaamka guix iyo amarrada la midka ah.
Taas ka sokow shaqo ayaa laga qabtay yareynta waqtiga isku duwidda iyo isticmaalka kheyraadka marka la fulinayo amarka "guix jiido" iyadoo laga faa'iideysanayo isku-duwaha cusub ee lagu soo bandhigay Guile 3.0.4 iyo lagu daray adeegga hurd-vm oo leh nidaamka Guix GNU / Hurd iskudhaf-iskudubarid ah oo u shaqeeya sidii mashiin muuqaal ah GNU / Linux.
Ayaa lagu daray saddex ikhtiyaar oo beddelaad xirmo cusub ah "–With-debug-info", "–with-c-toolchain" iyo "- la'aan tijaabooyin".
Amarka "Guix pack -RR" waxay kudareysaa taageerada mishiinka "fakechroot" si loo abuuro xirmooyin dib uedejin loogu sameyn karo taas oo lagu maamuli karo deegaanno aan lahayn Guix.
Lagu daray "gnu image" moduleka iyo "guix system disk-image –image-type = TYPE" amarka ah in lala shaqeeyo sawirada nidaamka ee ku saabsan ISO-9660, qcow2 oo leh qeeybaha ext4, ext2 oo leh xulashooyinka Hurd, iwm.
Waxaa kale oo lagu sheegay adeegyada nidaamka cusub ayaa lagu daray lxqt, udev-laws, hostapd, zram, autossh, webssh, ganeti, gmnisrv, guix-build-xiriiriye, guix-build-iskuduwaha-wakiilka, guix-dhiso-isuduwaha-safka dhisa, hurd-console, hurd-getty, hurd-vm, rshiny.
Iyo sidoo kale noocyada la cusbooneysiiyay ee barnaamijyada ku jira 3652 xirmo, 1999 xirmooyin cusub ayaa lagu daray. Oo ay ku jiraan noocyada la cusbooneysiiyay ee GNOME 3.34.2, MATE 1.24.1, iftiin 0.24.2, xfce 4.14.2, xorg-server 1.20.8, bash 5.0.16, gcc 10.2.0, gimp 2.10.22, glibc 2.31, tag 1.14.10 , inkscape 1.0.1, libreoffice 6.4.6.2, Linux-libre 5.9.3, openjdk 14.0, Python 3.8.2, miridhku 1.46.0.
Isbeddel kale oo la sheegay:
Xaraashka ugu yar ee loo dejiyay naqshadaha x86_64 iyo i686 ayaa laga dhigay 60MB.
Taageero dheeraad ah loogu daray FS NTFS rakibayaasha shaxanka.
Shaqada ayaa ka bilaabatay hirgelinta taageerida GNU / Hurd.
Degso Guix 1.2
Ugu dambeyntiina kuwa xiiseynaya inay tijaabiyaan maareeyaha xirmada ama qeybinta, waad hubin kartaa faahfaahinta rakibidda iyo / ama u hel sawirrada soo dejinta, Xiriirka soo socda.
Sawirro loogu talagalay rakibidda USB Flash (489 MB) iyo isticmaalkooda nidaamyada hufnaanta (479 MB). Shaqada lagu taageerayo i686, x86_64, armv7 iyo aarch64 naqshadaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Linux qaybinta iyo maareeyaha xirmada Guix 1.2 horay ayaa loo sii daayay